Ciidammada Sudan oo qabsaday dhul beereed ay ku muransanaayeen Itoobiya | Berberanews.com
Home WARARKA Ciidammada Sudan oo qabsaday dhul beereed ay ku muransanaayeen Itoobiya
Ciidammada Sudan oo qabsaday dhul beereed ay ku muransanaayeen Itoobiya
Sudan-(Berberanews)-Suudaan waxay sii wadaa inay Milatariga geyso dhul beereedka lagu muransan yahay ee Suudaan ee dariska la ah gobolka Tigree ee dagaaladu aafeeyeen ee Itoobiya.
Dowladda Suudaan kama hadal dhaqdhaqaaqa ciidamada. Ciidamada Suudaan ayaa u dhaqaaqay aagga beeralayda ee xadka la leh Itoobiya Khamiistii waxayna ku faafeen dhul ay gacanta ku hayeen maleeshiyooyin Itoobiyaan ah in ka badan 25 sano – oo ah isha dheer ee khilaafka u dhexeeya Khartoum iyo Addis Ababa.
Kooxo hubaysan oo Itoobiyaan ah oo loo yaqaan “Shefta” ayaa aad u firfircoon xilliyada goosashada sanad walba, iyagoo dhaca dalagyada ka soo baxa beeraha ku yaal Fashaqa iyo deegaannada kale ee ay sheegato Suudaan.
Sarkaal ka tirsan ciidamada amniga ee deegaanka oo codsaday in aan magaciisa la shaacin ayaa u sheegay idaacadda VOA-da in ciidamada Suudaan ay xaqiijinayaan gacan ku haynta dhulkaas.
Wuxuu yidhi militariga Suudaan wuxuu ku faafay bariga Berkat Norain – asal ahaan dhulka Suudaan. Sababtoo ah militariga Itoobiya waxay ku mashquulsan yihiin khilaafka Tigray, waa fursad ay militariga Suudaan kula wareegi karaan aaggan.
Bishii May ee sanadkan, maleeshiyo Itoobiyaan ah ayaa weerartay tuulooyinka ku hareeraysan magaalada Bariga Qadarif, halkaas oo ay ku dhinteen shan qof oo rayid ah iyo dhowr ka tirsan millatariga Suudaan.
Suudaan ayaa cambaareysay weerarka waxayna ku eedeysay dowlada Ethiopia inay taageerto maleeshiyaadka.
Sudan iyo itoobiya
Previous articleShil dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay Waqooyiga Hargeysa
Next articleMudaharaad gilgilay Garowe oo albaabada u laabay goobihii Ganacsiga